"नेपाली नर्कालयमा यहाँलाइ स्वागत छ" - Himalay Online Media
आइतवार, पुस १३, २०७१
– विदुर दर्नाल
एक दिन एउटा मानिस मरेर नर्कमा पुगेछ । जब उ नर्कको पहिलो गेट छिर्यो एउटा ठुलो रुखको फेदमा टाँसेको टिनको बोर्डमा उसको आँखा पर्‍यो । त्यहाँ लेखिएको थियो “नर्कमा पाल्नुहुने सबै मनुष्य जाति लाई जुनसुकै देशको नर्कमा प्रवेश गर्न छुट दिईएको छ ” । एकछिन छेवैको प्रतिक्षालयमा बस्यो अनि कुन देशको नर्कालय मा प्रवेश गरौ त भन्ने सोचमा डुब्यो ।
अन्त्यमा उसले अमेरिकाको नर्कमा जाने सोच बनायो अनि सिधै अमेरिकाको नर्क तिर लाग्यो । जब उ अमेरिकी नर्कको बडेमानको गेटमा पुग्यो त्यहाँ एउटा जिउभरि काडेदार टाटु भएको अनि हातमा विधुतिय लाठी बोकेको पहरेदार लाई भेट्यो । पहरेदार अमेरिकी नै भएकाले उसले टुट-फुट अंग्रेजीमा भित्रको नर्कको बारेमा सोध्यो-“सर कृपया मलाई अमेरिकी नर्कको सजायको बारेमा बताइदिनु हुन्छ कि?” जब उसले उत्तर पायो उसको मनमा एउटा भयानक प्रलय नै गयो । पहरेदारले जवाफ यसरी दियो “खासै त्यस्तो नया प्रविधि त छैन , सबै भन्दा पहिला तपाईलाई स्नान गराईन्छ त्यसपछि इलेक्ट्रिक चेयरमा एक घण्टा राखेर करेन्ट दिइन्छ,अनि लगत्तै तातो रोडा बालुवामा सुताइन्छ । करिब १ घण्टा पछि एउटा दैत्य आएर पीठमा पचास कोर्रा बर्साउछ ।” यति सुनेपछि उसलाई त्यहाँ प्रवेश गर्नु उचित लागेन । त्यत्रो सजाए थाम्ने आट उसले गर्न सकेन र तत्काल त्यहाँ बाट निस्किएर रुसको नर्कतिर हान्नियो । रुसको पहरेदार संग पनी सोही जानकारी खोज्यो । अफसोस, रुसी पहरेदारले पनि लगभग त्यस्तै सजाएको बारेमा जानकारी दियो, जुन पहिले अमेरिकी पहरेदारले उसलाई सुनाएको थियो । यसरि नै उ सबै देशको नर्कको गेट अगाडी पुग्यो । तर कुनै देशको नर्कमा पनि उसले सजायमा छुट पाएन । अन्त्यमा उसको यात्रा यस्तो नर्कालयको गेट अगाडी रोकियो जुन गेटको माथि ठुलो अक्षर मा लेखिएको थियो “नेपाली नर्कालयमा यहाँलाइ स्वागत छ।” गेटको अगाडी नेपाली नर्कमा जानेहरुको लामो लाइन थियो । अनि पहरेदारले एक-एक गर्दै मानिसहरू लाई गेट बाट भित्र पठाउदै थियो । मानिसहरू नर्कमा जान तछाडमछाड गरिरहेका देखिन्थे । नेपालको नर्कमा जाने यस्तो भिड देखेपछी उसलाई लाग्यो यहाँ पक्कैपनि सजाय कम होला । त्यसैले यहाँ धेरै भिड छ। यहि सोचले उ तत्काल सिधै पहरेदारलाई यहाको सजायको बारेमा सोध्यो पहरेदारको जवाफ त्यस्तै नै आयो जुन पहिले अरु राष्ट्रका पहरेदारहरुले उसलाई सुनाएका थिए । “सबैभन्दा पहिला तपाइलाई स्नान गराईन्छ त्यसपछि इलेक्ट्रिक चेयरमा एक घण्टा राखेर करेन्ट दिइन्छ अनि लगत्तै तातो रोडा बालुवामा सुताइन्छ । करिब १ घण्टा पछि एउटा दैत्य आएर पीठमा पचास कोर्रा बर्साउछ।” उ थकित भयो तर सवाल गर्न छाडेन । “यो सजाय त सबै देशको नर्कमा छ नी ! तरपनि किन यहाँ चाहिँ यस्तो भिड ? ” उस्ले प्रश्न तेर्सायो । अनि पहरेदारको जवाफ चाही यस्तो थियो “हामीसंग इलेक्ट्रिक चेयर त्यस्तै छ । जुन अरु देशको नर्कमा पनि प्रयोग हुन्छ तर यहाँ लोडसेडिङ्गको कारणले बिना इलेक्ट्रिक चेयरमा बसाइन्छ । करेन्ट चाही लोडसेडिङ्ग घटेपछि लगाइने भनि औठा छाप गराईन्छ। कोर्रा हान्ने दैत्य सरकारी कर्मचारी भएकोले आउछ दस्तखत गर्छ,चिया नास्ता गर्न जान्छ अनि फर्किदैन । यदि गल्तीले फर्किहाल्यो भनेपनि एक ,दुई कोर्रा हान्छ अनि खातामा पचास कोर्रा लेखेर जान्छ…….!!!”
होक्लाबारी मोरङ (हाल मलेसिया )
सुवर्णलता माथी साहित्यकारहरुको समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न ।
उर्लाबारी महोत्सव सम्भावना र चुनौती